U hadalka si xor ah. Sida warbaahinta bulshadu u noqday madalka siyaasadda ugu awood badan Afrika
Maanta in ka badan kala bar dadka adduunka ayaa ku xiran internetka. Afrika gudaheeda, waxaa jira in ka badan 590 milyan oo isticmaale internetka ah, iyo in ka badan 800 milyan oo macaamiil ah oo telefoonnada gacanta ah.
Faafintan qalabka dhijitaalka ah iyo isku xirka ayaa qaaradda Afrika u keenaya is-beddel siyaasadeed, dhaqaale, bulsho iyo dhaqameed. Gaar ahaan, tignoolajiyada cusub ee is-gaarsiinta ayaa saameyn weyn ku yeeshay dimuqraadiyadda iyo xuquuqda madaniga ah.
Waxa ay baxsheen madal cusub oo lagu abaabulo shacabka laguna faafiyo wararka iyo faallooyinka, balse waxaa sidoo kale lagu hayaa faafreeb, dabagal iyo ka faa’iidaysi ay sameeyaan xoogagga dimuquraatiga ka soo horjeedo.
Xittaa inkastoo ay si degdeg ah u faafeen tignoolajiyada iyo aaladaha internetka, 2021 wuxuu ahaa sannadkii 16aad ee isku xiga oo hoos u dhacay xorriyadda adduunka, sida uu qabo Freedom House.
La aasaasay 1941, Freedom House wuxuu ahaa ururkii ugu horreeyay ee adduunka oo dhan ku ololeeya horumarinta xorriyadda. Hadafkoodu waa inay ka hadlaan khataraha ku wajahan dimoqraadiyada iyo inay awood u siiyaan muwaadiniinta inay isticmaalaan xuquuqdooda aasaasiga ah.
Tan iyo 1973, waxay qiimeeyeen xaaladda xorriyadda adduunka.
Dal kasta iyo dhul kasta, Freedom House waxa ay eegtaa 13 arrimood oo muhim ah oo lagu cabbiro xuquuqda siyaasadda iyo xorriyadaha madaniga ah ee tusmahooda, iyagoo falanqaynaayo wax kasta laga soo bilaabo habka doorashada iyo xorriyadda hadalka ilaa sareynta sharciga, madaxbannaanida shakhsi ahaaneed iyo xuquuqda shakhsi ahaaneed.
Wadan kasta ayaa markaa loo kala saaraa mid aan xor ahayn, qayb xor ah, iyo mid xor ah.
Marka ay tignoolajiyada cusub sii faafto, awoodda abaabulka tiro badan oo muwaadiniin ah ayaa kordheysa. Maamullada kali-taliska ah ayaa ka jawaabay iyagoo isku dayaya inay xakameeyaan sheekada, oo ay xakameeyaan fikradaha ayaga ka soo horjeedo.
Markii ugu horreysay ee hababka 'dijitaalka la demiyay' koonfuurta Sahaarada Afrika waxay dhacday 2007 markii madaxweynihii hore ee Guinea Lansana Conté uu amar ku bixiyay in la demiyo ka dib markii la qabtay mudaaharaadyo lagu codsanaayo inuu is-casilo.
Xakameyn kale oo aad laga hadlay adduunka oo dhan wuxuu dhacay intii lagu jiray mudaaharaadyadii dalalka Carabta ee 2011, halkaas oo xannibaadda warbaahinta bulshada iyo xiritaanka internetka ahaa jawaab celin la yaqaan intii lagu jiray xasillooni darrada bulshada ama isu soo baxyada ballaaran ee dawladda looga soo horjeedo.
Afar waddan kaliya oo qaarada ah ayaa lagu aqoonsaday in heerkooda yahay 'xor' warbixinta Freedom House sanadka 2022: Gaana, Koonfuurta Afrika, Namibiya, iyo Botswana.
In kasta oo loo arko waddan xasilloon, dimuqraadi ah oo barwaaqo ah, Nayjeeriya waxaa lagu aqoonsaday inuu yahay dal 'qayb ahaan xor ah'. Aqoonsigaan waxaa sababay arrimo badan, oo ay ku jiraan xayiraaddii dhowaan ay Nayjeeriya saartay Twitter-ka, taasoo ka dhalatay ka saarista Twitter qoraal uu sameeyay madaxweyne Muhammadu Buhari, kaasoo ku hanjabay inuu ciqaabi doono gooni-goosadka gobolka.
Twitter ayaa tan iyo markii dib loo soo celiyay ka dib ballanqaadkii baraha bulshada inuu furo xafiis maxalli ah, iyo heshiisyo kale oo lala galay maamulada dalka ku yaal Galbeedka Afrika.
Waddan kale oo si dhab ah u horumaraya, xittaa inkastoo horumarkaan yahay mid taxaddar ah waa dalka Gambia. Dalka ayaa dhawaan lagu aqoonsaday inuu yahay mid 'qayb ahaan xor ah', maadaama ixtiraamka xoriyada aasaasiga ah oo ay ku jiraan xuquuqaha isu imaatinka xorta ah, ururrada, iyo ra'yi dhiibashada ku fiicnaadeen maamulka Barrow, laakiin waxay la kulantay dhaleeceyn ku saabsan musuqmaasuqa sii socda.
'(Xeerka Helitaanka Cusub ee Macluumaadka) wuxuu ahaa tallaabo wanaagsan, dowladduna way iska dhaaftay qorshayaasha sharci-darrada ah ee ku saabsan xorriyadda internetka.'
Demba Kandeh, saxafi, Jaamacadda Gambia
Dhaqdhaqaaqayaasha ayaa soo dhaweeyay saxiixii uu dhawaan saxiixay Madaxweyne Barrow ee sharciga marin u helka macluumaadka (ATI), ka dib ololihii dheeraa ay ku doonayeen in ay ku helaan xoriyada cusub ee ay heleen dadka caadiga ah ee Gambia.
Qulqulka macluumaadka iyo ra'yiga ee Afrika ayaa mar walba is-beddelaya waana sii kordhayaa. Warbaahinta bulshadu hadda waa aalad awood badan oo is-beddel keenta, iyo sidoo kaleba keenta warar been abuur ah. Dawladuhu waxay sii wadi doonaan inay isku dayaan inay xakameeyaan wada hadalka ka dhexeeya iyaga iyo muwaadiniintooda, halka hawl-wadeennadu eegayaan inay helaan habab cusub oo lagu maqlo farriintooda.
Maadaama ay leeyihiin dadweyne da' yar, in badan oo ka mid ah kobcinta siyaasadda, dhaqanka iyo bulshada Afrika wuxuu ka dhici doonaa khadka internetka.
Soo ogow sida dhalinyarada Ghana ay u isticmaalayaan warbaahinta bulshada si ay uga hortagaan wararka been abuurka ah, u muujiyaan dareenkooda oo ay u sii wadaan inay riixaan isbeddelka ay rabaan inay ku dhex arkaan bulshada, gudaha wararka ugu dambeeyay ee Afrika Verified Beyond The Headlines film.
khalkhalka macluumaadka. Shirkadaha la dagaalamma faafinta wararka been abuurka ah ee Afrika Hadda aqri
Xiritaanka farqiga dhijitaalka ah. Sida uu Covid-19 u bilaabi karo kacdoon waxbarasho isku-dhafan oo Afrika oo dhan ahHadda aqri